सधैं दौडन पाउँ, देशका लागि केही गर्न पाउँ: हरिबहादुर रोकाया – HamroKatha
सधैं दौडन पाउँ, देशका लागि केही गर्न पाउँ: हरिबहादुर रोकाया
स्वस्थ्य शरीर भए मन पनि स्वस्थ्य हुन्छ, मन स्वस्थ्य भए विचार सकारात्मक बन्छ ।
सुम्निमा चाम्लिङ २०७४ फागुन ८ गते १६:३७
तीनपटक ‘एभरेष्ट म्याराथुन’मा स्वर्ण पदक’ जितेर गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा दर्ता भएका हरिबहादुर रोकाया कीर्तिमानी धावक हुन् । उनको जीवन दौडप्रति समर्पित छ । धरान रन समूहको आयोजनामा गत साता भएको वृहत दौडका मुख्य आकर्षण थिए रोकाया । उनलाई रन समूहले सम्मानित पनि गरेको छ । रोकायासँगको वार्ता ः
-तपाई प्रत्येक दिन किन दौडनुहुन्छ ?
दौडन मलाई रमाइलो लाग्छ । दिनहुँ दौडिने बानी नै परिसक्योे । दौडिएन भने मलाई केहि नपुगे जस्तो हुन्छ । स्वस्थ्य जीवनका लागि म दौडिन्छु र अरुलाई पनि दौडिन सल्लाह दिन्छु । सुरुसुरुमा प्रतियोगिता जित्नलाई दौडिन्थें, पछि गएर प्रतियोगितामा सहभागी हुन, स्वस्थ्य रहन र सकारात्मक सन्देश फैलाउन दौडन थालें ।
-तपार्ई दौडिरहँदा केके सोच्ने गर्नुहुन्छ ?
म प्रशिक्षक पनि हूँ, त्यसैले मेरो दैनिकी एथ्लेक्टीस खेलाडीहरुसँग बित्छ। म्याराथनका लागि सधैं टे«निङमा उनिहरुसँगै हुन्छु । जहाँसम्म दौडँदा सोंच्ने कुरा छ, दौडिरहँदा केही न केही सोंचिरहेको हुन्छ । मेरो खेलाडीले नाम कमाओस्, विश्वका कुनाकुनामा पुगेर नेपालको इज्जत बढाओस्, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउन सकोस भन्ने लाग्छ र यस्तै कुरा सोंच्छु।
ड्ड दौडनका लागि मुख्य के कुरा चाहिदो रहेछ ?
खेलाडीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अनुशासन नै हो । अनुशाशन बिना खेलाडी बन्न सकिँदैन । दौडन पर्याप्त अभ्याश चाहिन्छ । परिवारबाट साथ र सहयोग हनु उत्तिकै जरुरी छ । सकारात्मक सोच सोच हुन जरुरी हुन्छ । अनि मात्र खेलाडीले दौडमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ ।
-दौडँदा केके फाइदा छ ?
दौडँदा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । शरीर मात्र नभएर मन पनि स्वस्थ रहन्छ। विभिन्न कुलतबाट टाढा रहन मद्दत पुग्छ । आशावादी र सकारात्मक रहन सिकाउँछ । दौडमा लागेर भविष्य बनाउन पनि सकिन्छ ।
-दौड पुरा गर्नु आफैमा विजेता बन्नु हो कि होइन ?
एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो । मेरो विचारमा दौड पुरा गर्नु नै सफलता हो, विजय हासिल गर्नु हो । प्रतियोगितामा भाग लिएपछि बीचैमा छाड्नु हँुदैन । दौडमा अगाडि भइयोस् या पछाडि परियोस्, हार खान हुँदैन । दौड पूरा गर्नु नै जित्नु हो । जित र हार त खेलको नियम मात्र हो । साँच्चैको जित भनेको चाहीँ प्रतियोगितामा पूरा भाग लिनु हो । जसले दौड पुरा गर्छ उसले जितको महशुश गर्छ । फेरी अर्को पल्टका लागि पे्ररणा पाउँछ ।
-धरान रन समुहले खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्याए वापत सम्मानित गर्दा कस्तो लागेको छ ?
सम्मानित हुन पाउदा साह्रै खुसी लागेको छ । म सुदुर पश्चिम जुम्लाको मान्छे तर पनि पूर्वको सुन्दर नगरी धरानले मलाई सम्मान गर्यो । राम्रो काम गर्दा अवश्य पनि सम्मान पाइन्छ भन्ने प्रेरणा अरु खेलाडीलाई पनि मिलेको छ ।
-५७ वर्षको उमेरमा पनि युवा जोश र जाँगरको देखिनुहुन्छ, स्वस्थ्य र फुर्तिलो देखिनुहुन्छ । यो कसरी सम्भव भइरहेछ ?
म निरन्तर अभ्यास गरिरहन्छु । प्राय समय ट्रेनिङमा रहिरहन्छु त्यसैले स्वस्थ्य छु । अहिलेसम्म कुनै रोगले छुन सकेको छैन । दैनिक केहि समय दौडिने हो भने स्वस्थ्य र जाँगरिलो भइन्छ । स्वस्थ्य शरीर भए मन पनि स्वस्थ्य हुन्छ, मन स्वस्थ्य भए विचार सकारात्मक बन्छ ।
-खेलकुद क्षेत्रमा कतिको भविष्य देख्नुहुन्छ ?
खेल क्षेत्रको भविष्य सुन्दर देख्छु । अरु देशसँग नेपालको तुलना गर्न नमिल्ला तर पछिल्लो समय खेल क्षेत्रबाटै भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने देखिएको छ । त्यस्तो वातावरण बनिरहेको छ । देश संघीयतामा गएको छ, खेल क्षेत्रलाई केन्द्र बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि प्रोत्साहित गर्न सक्छन् । त्यसैले धेरै आशावादी छु । देशले खेलकुद क्षेत्रमा पर्याप्त लगानि गर्ने हो भने हरिबहादुर रोकाया र बैकुण्ठ मानन्धर मात्र हैन उनीहरु भन्दा प्रतिभावान खेलाडी जन्माउन सकिन्छ । आफ्नो देशको झण्डा विश्वमा फहराउन सकिन्छ ।
-भावी योजना के छ ?
बाचुन्जेल खेल क्षेत्रमा रमाउन पाउँ । राम्राराम्रा खेलाडीहरु जन्माउन पाउँ । सधैं देशका लागि केही गर्न पाउँ, मृत्यु अघिसम्म दौडन पाउँ ।